Tapfiliate: Mgbakwunye Mgbakwunye Ahịa Ahịa | Martech Zone
Wednesday, November 19, 2014 Thursday, July 23, 2015 Douglas Karr
Inyocha ego na mbipụta dịka Martech chọrọ obere mgbalị. Anyị na-eji ọtụtụ ụzọ dị iche iche, gụnyere mgbasa ozi akwụ ụgwọ site na netwọk mgbasa ozi anyị, site na Google Adsense, site na mmekọrịta na nkwado - yana site na ịgbakwunye ahịa.
Gịnị bụ Mgbakwunye ahia?
Mgbakwunye ahia bu udiri ahia nke n’oru ahia n’enye ndi mmadu ahia ma obu ndi ozo n’abia obula ma obu ndi ahia nke ahia nke ha.
Kedu ka Mgbakwunye Ahịa Ọrụ?
Usoro ochie bụ iji nye koodu ahịa pụrụ iche ma ọ bụ koodu mbelata nke onye ahịa ga-abanye na usoro nyocha maka ka enwee ike nweta mgbakwunye maka ire ọ bụla. Agbanyeghị, ọrụ mgbakwunye mmekọ n'ịntanetị na-arụ ọrụ site na ịnye onye ọ bụla njikọ nwere koodu nyocha pụrụ iche nke ha nwere ike iji na njikọta na saịtị ha niile. Mgbe onye na-agụ clicks njikọ ahụ pụrụ iche, a na-enyocha onye ahịa na-akpaghị aka n'oge usoro ịzụta ha niile ka amata mgbakwunye ahụ na akpaghị aka.
Mgbakwunye ahia bu ezigbo uzo iji ahia ahia gi n'ihi na ị na-akwụ ugwo na ntughari… obughi na clicks ma obu ihe ngosi. Nke ahụ pụtara na ị na-akwụ mmadụ ụgwọ naanị mgbe ị nwetara ire ere! Ma ị naghị akwụ ha ụgwọ ruo mgbe a kwụrụ gị ụgwọ nke mbụ yabụ na enweghị nsogbu ego, ma.
Ijikwa mmemme mgbakwunye nwere ike ịdị mgbagwoju anya, agbanyeghị! Idebe ndekọ akụkọ, njikọ, ahịa, na ịkwụ ụgwọ nwere ike ịpụ na njikwa ọsọ ọsọ na-enweghị usoro njikwa njikwa mmekọ. Mgbakwunye bu usoro ahia ahia ahia. Ma maa gịnị? Nke ahụ bụ njikọ njikọta site na sistemụ mgbakwunye ha.
Tapfiliate Key Akụkụ
Na-ejikọ Tapfiliate site na iji otu modulu ha, ntuziaka ma ọ bụ jiri aka wụnye.
Setịpụ mmemme mgbakwunye gị na nhazi ọrụ gị.
Tinye ọkọlọtọ na njikọ ederede maka ndị mmekọ gị iji.
Kesaa url òkù mmemme gị iji tinye mgbakwunye na mmemme gị.
Jikwaa ma nyochaa echiche, pịa, mgbanwe, CTR, CVR, geo-nkesa, wdg.
Lelee ma kwado profaịlụ mmekọ.
Ọbụna nke ka mma, Mgbakwunye enweworị ọtụtụ njikọta, gụnyere Magento, Prestashop, Shopify, WordPress, WooCommerce, Ecwid, Big Commerce, 3dcart na Hikashop.
Tags: 3dcartMgbakwunye marketingNnukwu ahiaEcwidHikashopmagentoPrestaShopụlọ ahịanjikọtaKedu ihe bụ Mgbakwunye ahịawoocommerceWordPress
Igodo 4 iji mee ka usoro ihe omuma nke vidio gi di nma
Nov 20, 2014 na 5:21 AM
Ekwenyere m na mkpa nke sistemụ azụmaahịa mgbakwunye. Daalụ maka òkè.
Jun 26, 2015 na 5:46 AM
Hi bụ tafiliate a wordpress ngwa mgbakwunye?